Ukubonakaliswa akufani neMpembelelo: Lixesha lokuba uyeke ukusebenzisa uluvo lokulinganisa ixabiso | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 15, 2019 NgoMvulo, Julayi 15, 2019 U-Shannon Tucker
Zintoni izinto ezivelayo?
Ukuvela linani leebhlo ezinokubakho kwibali lakho okanye kwimithombo yeendaba zosasazo esekwe kubafundi abaqikelelweyo / ababukeli bento / umthombo.
Kwi-2019, ukubonakala kuyahlekwa ngaphandle kwegumbi. Akuqhelekanga ukubona ukubonakala kwiibhiliyoni. Kukho i-7 yezigidigidi zabantu emhlabeni: malunga ne-1 yezigidigidi kubo abanawo umbane, kwaye uninzi lwabanye alukhathalelanga inqaku lakho. Ukuba une-1 yezigidigidi ezibonakalayo kodwa uphuma emnyango kwaye akukho mntu unokukuxelela malunga nenqaku, une-metric engeyonyani. Ungayichazanga eyokuba zingaphi iindlela onxibelelana ngazo noluntu ziibhot nje:
Iibhoti ziqhube phantse i-40% yazo zonke izithuthi ze-Intanethi ngo-2018.
IiNethiwekhi zoThutho, Ingxelo ye-Bad Bot ye-2019
Cinga ngeengxelo zakho zekota zokuphinda ubambe njengesivumelwano phakathi kombutho kunye ne-arhente ye-PR okanye phakathi kwakho nomphathi wakho-nantsi indlela esiza kuyichaza ngayo impumelelo kunye nendlela esivuma ukuyilinganisa ngayo. Usenokufuna ukubonelela ngomboniso kuba umxhasi wakho okanye umphathi ubabuza. Nangona kunjalo, iqhinga lokwenza izinto ezimbini:
Ukubonelela umongo kwezo zinto zibonakalayo
Ukubonelela iimetrikhi ezongezelelweyo elithetha ibali elingcono.
Ukutshintshwa kweetriki zobudlelwane boluntu kunokubandakanya:
Inani lezikhokelo okanye uguquko. Iimpawu zakho zinokuya kwikota ukuya kwikota, kodwa ukuthengisa kwakho kuhlala kucaba. Kungenxa yokuba usenokungajolise kubantu abalungileyo. Fumana umbono wokuba zingaphi izikhokelo ozivelisayo.
Uvavanyo lokwazisa: Usebenzisa isixhobo esifana neSurvey Monkey, bangaphi abantu ababone imveliso okanye inyathelo lakho ezindabeni kwaye benza okanye batshintsha isimilo ngenxa yaso?
Uhlalutyo lukaGoogles: Khangela i-spikes kwitrafikhi yewebhu xa iindaba zakho zibalekile. Ukuba inqaku liqulethe i-backlink, fumana ukuba bangaphi abantu abacofe iwebhusayithi yakho kwinqaku kwaye ubone ukuba bachitha ixesha elingakanani apho.
A uvavanyo / B. Bhengeza imveliso entsha okanye intengiso kusetyenziswa amajelo eendaba kunye nemithombo yeendaba zentlalo kodwa ubanike iikhowudi zentengiso ezahlukileyo ukumisela ukuba yeyiphi eqhuba ngakumbi ukugcwala (imithombo yeendaba okanye eyentlalo).
Uhlalutyo lomyalezo: Mingaphi imiyalezo yakho ephambili ebandakanyiweyo kumanqaku? Umgangatho ngaphezu kobungakanani ubaluleke ngakumbi.
Cinga ngale nto: zenze ngathi usegumbini abakhuphisana nabo Usenokuba ukhwaza kakhulu-kodwa abo ukhuphisana nabo abazolileyo basebenzisa i-PR ukuqhuba ukuthengisa, ukwandisa ulwazi, kunye noshintsho kutshintsho.
I-PR elungileyo imalunga nokusebenzisa imithombo yeendaba ukwenza umahluko-kunye nokufumana iimetrikhi ezifanelekileyo ukubona ukuba kuyasebenza na.
UShannon yingcali enonxibelelwano noluntu enamava efumana abathengi kwiindaba. UShannon ukholelwa kumandla onxibelelwano oluntu ngokudibeneyo ngokudibanisa imali ehlawulelweyo, ehlawulelweyo kunye neyabanini. UShannon nguMlawuli oPhezulu wezoNxibelelwano kwi-SSPR.
Iingcebiso ezivela kwiiSayithi eziGuqula ngokuPhezulu